ISuzhou Kudi Trade Co., ltd.
ISuzhou Kudi Trade Co., ltd. ungomunye wabakhiqizi abakhulu bamathuluzi okuzilungisa nezinja ezihoxisayo eChina futhi besikhethekile kulo mkhakha iminyaka engaphezu kwengu-19. Ifektri yethu ibiseSuzhou, okuyihora elilodwa kuphela ngesitimela ukusuka eShanghai Hongqiao Airport. Sinezimboni ezimbili ezenzelwe amathuluzi okuzilungisa kanye nezinqola zenja ezihoqekayo, amakhola namathoyizi wesilwane anendawo yokukhiqiza ephelele kumamitha-skwele angama-9000. Sine-WALMART Walgreen, Sedex P4, BSCI, BRC kanye ne-ISO9001audit ect. Sinezisebenzi eziphelele ezizungeze i-230 kuze kube manje.
Manje sesinezinto ezingama-800 sku nezinto eziyi-130 ezinelungelo lobunikazi. Njengoba manje ukuqamba kuyisihluthulelo semikhiqizo, ngakho-ke njalo ngonyaka sizotshala imali engaba ngu-20% yenzuzo yethu ezintweni ezintsha ze-R & D futhi sihlale senza imikhiqizo engcono yezilwane ezifuywayo. Njengamanje, sinabantu abangaba ngu-25 ku-R & D tem futhi singakwazi ukuklama izinto ezintsha ezingama-20-30 njalo ngonyaka. Kokubili i-OEM ne-ODM kwamukelekile efektri yethu.
Futhi ikhwalithi yiyona ebesihlala sigxile kuyo. Sihlala sinikeza amakhasimende ethu isiqinisekiso seminyaka emi-2 yemikhiqizo ukuqinisekisa ikhwalithi yethu.
Amakhasimende ethu avela emazweni angaphezu kuka-35 nezifunda. I-EU kanye nenyakatho Melika yimakethe yethu eyinhloko. Sisebenze amakhasimende angaphezu kuka-2000, kufaka phakathi i-Walmart, i-Walgreen, i-Central & Garden pet njll. Sizovakashela njalo amakhasimende ethu amakhulu kwesinye isikhathi futhi sishintshe izinhlelo zamasu ezizayo nabo ukuqinisekisa ukubambisana okuhlala isikhathi eside.
Umgomo wethu ukunikeza izilwane ezifuywayo uthando oluthe xaxa, ukucwaninga nokuthuthukisa imikhiqizo emisha, ukudala impilo elula kakhulu nokunethezeka kubantu nezilwane ezifuywayo. Siyajabula ukunikeza amaklayenti ethu ngemikhiqizo emihle kanye nezixazululo ezisebenzayo nezomnotho zempilo yawo yansuku zonke.
Siyakwamukela ukuvakasha kwakho! Sibheke phambili ukubambisana nawe!